Midera An’Andriamanitra sy Kristy ny Vahoaka Be | Gazety Fianarana
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Janoary 2021
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Amis Anglisy Anglisy Liberianina Arabo Arhuaco Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Emberá (Chamí) Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Garifuna Gitonga Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guambiano Guarani Géorgien Haoussa Havu Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Idoma Igede Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kituba Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laosianina Lari Lendu Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lolo Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Manyawa Mapudungun Marathe Mari Marshall Masedonianina Mashi Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Min Nan (Taïwan) Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nicobar Niue Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Phimbi Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Romania) Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Songomeno Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Taabwa Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tamoul (Romanina) Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Ivoarianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Kongoley Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tewe Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
LAHATSORATRA FIANARANA 3
Midera An’Andriamanitra sy Kristy ny Vahoaka Be
“Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy avy amin’ny Zanak’ondry.”​—APOK. 7:10.
HIRA 14 Derao Ilay Mpanjaka Hitondra ny Tany
1. Inona no nitranga tamin’ny tovolahy iray rehefa avy naheno ny lahateny nataon’ny Rahalahy Rutherford izy?
NATAO batisa ny tovolahy iray tamin’ny 1926, tamin’izy 18 taona. Mpianatra ny Baiboly ny ray aman-dreniny. Izany no nahalalana ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’izany. Nanan-janaka telo lahy sy roa vavy ry zareo, dia nampian-dry zareo hanompo an’Andriamanitra sy hanahaka an’i Jesosy Kristy izy rehetra. Nihinana ny mofo sy nisotro ny divay daholo ny Mpianatra ny Baiboly tamin’izany, rehefa nankalaza ny Sakafo Harivan’ny Tompo isan-taona. Hoatr’izany koa no nataon’io tovolahy io. Niova tanteraka anefa ny zavatra nantenainy, rehefa naheno an’ilay lahateny hoe “Ny Vahoaka Be” izy. Ny Rahalahy Rutherford no nanao an’io lahateny miavaka io tamin’ny 1935, tamin’ny fivoriambe iray tany Washington, any Etazonia. Inona no noresahina tamin’izay?
2. Inona ilay fanazavana vaovao noresahin’ny Rahalahy Rutherford tao amin’ny lahateniny?
2 Nohazavain’ny Rahalahy Rutherford tao amin’ilay lahateniny hoe iza ilay “vahoaka be” resahina ao amin’ny Apokalypsy 7:9. Nieritreritra ny Mpianatra ny Baiboly talohan’izay hoe hankany an-danitra ny vahoaka be, saingy tsy tena nankatò ry zareo raha oharina amin’ny voahosotra. Nampiasa ny Soratra Masina àry ny Rahalahy Rutherford mba hanazavana hoe tsy voafidy hiaina any an-danitra ny vahoaka be. Nolazainy kosa fa anisan’ny ondry hafan’i Kristy * ry zareo, ary ho tafavoaka velona amin’ny “fahoriana lehibe” ka hiaina mandrakizay eto an-tany. (Apok. 7:14) Nilaza i Jesosy hoe: “Manana ondry hafa tsy ao amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, ary hihaino ny feoko izy, ka ho tonga andiany iray ireo sady ho iray ihany ny mpiandry.” (Jaona 10:16) Vavolombelon’i Jehovah tsy mivadika ireo ondry hafa ireo, ary manantena hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany. (Mat. 25:31-33, 46) Andao hojerentsika hoe inona no vokatr’io fanazavana vaovao io teo amin’ny mpanompon’i Jehovah be dia be, anisan’izany ilay tovolahy noresahintsika teo.​—Sal. 97:11; Ohab. 4:18.
FANAZAVANA VAOVAO NANOVA FIAINAN’OLONA AN’ARIVONY
3-4. Inona no vokatr’ilay fivoriambe tamin’ny 1935 tamin’ny olona an’arivony? Nahoana?
3 Nisy zavatra nahafinaritra be tamin’ilay fivoriambe. Izao no nolazain’ny Rahalahy Rutherford: “Iangaviana ireo rehetra manantena hiaina mandrakizay eto an-tany mba hitsangana.” Nilaza ny rahalahy iray nanatrika teo hoe efa ho ny antsasany mahery tamin’ny mpanatrika no nitsangana. Roa alina teo ho eo anefa ny olona nanatrika tamin’io. Hoy ilay mpandahateny avy eo: ‘Ireo ny vahoaka be!’ Falifaly be daholo ny mpanatrika tamin’izay sady nihorakoraka. Tonga saina ireo olona nitsangana ireo hoe tsy voafidy ho any an-danitra ry zareo. Fantany mantsy hoe tsy voahosotry ny fanahy masin’Andriamanitra izy. Nisy olona 840 natao batisa ny ampitson’iny, ary anisan’ny ondry hafa ny ankamaroany.
4 Inona no nitranga taorian’io lahateny io? Olona an’arivony no lasa tsy nihinana ny mofo sy nisotro ny divay intsony rehefa Sakafo Harivan’ny Tompo, anisan’izany ilay tovolahy noresahintsika tetsy aloha. Nanetry tena ny rahalahy iray ary nilaza hoe: “Tamin’ny Fahatsiarovana tamin’ny 1935 aho no farany nihinana ny mofo sy nisotro ny divay. Tonga saina aho mantsy hoe tsy nampiasa ny fanahy masina i Jehovah mba hahatonga ahy hanantena ho any an-danitra. Manantena hiaina eto an-tany kosa aho, dia hanova ny tany ho paradisa.” (Rom. 8:16, 17; 2 Kor. 1:21, 22) Be dia be koa no nahatsapa hoatr’izany. Nihabetsaka foana ny vahoaka be taorian’izay, ary niara-niasa tamin’ny sisa voahosotra. *
5. Ahoana no fiheveran’i Jehovah ny olona lasa tsy mihinana ny mofo sy misotro ny divay intsony?
5 Hitantsika teo hoe nisy olona tsy nihinana ny mofo sy nisotro ny divay intsony taorian’ny 1935, rehefa Fahatsiarovana. Ahoana no fahitan’i Jehovah an-dry zareo? Ary amin’izao? Ahoana raha misy Vavolombelon’i Jehovah vita batisa mihinana ny mofo sy misotro ny divay, nefa tonga saina atỳ aoriana hoe tsy voahosotra? Ahoana no fahitan’i Jehovah azy? (1 Kor. 11:28) Misy, ohatra, nanao an’izany satria diso hevitra dia nieritreritra hoe ho any an-danitra. Raha miaiky anefa izy hoe diso sady tsy mihinana ny mofo sy misotro ny divay intsony, ary manohy manompo an’i Jehovah sady tsy mivadika aminy, dia azo antoka fa heken’i Jehovah ho anisan’ny ondry hafa izy. Na dia tsy mihinana ny mofo sy misotro ny divay intsony aza izy rehefa Fahatsiarovana, dia mbola manatrika eo ihany satria tena mankasitraka an’izay nataon’i Jehovah sy Jesosy ho azy.
6. Inona no didy nomen’i Jesosy ny anjely?
6 Tena efa akaiky ny fahoriana lehibe. Tsara àry raha mandinika ny Apokalypsy toko faha-​7 isika, fa hampahery antsika izany. Miresaka momba ny Kristianina voahosotra sy ny vahoaka be anisan’ny ondry hafa izy io. Mandidy ny anjely i Jesosy ao mba hihazona ny rivotra efatry ny fandringanana. Tsy tokony hamotsotra an’ilay rivotra ry zareo, raha tsy rehefa voaisy tombo-kase daholo ny Kristianina voahosotra, izany hoe hitan’i Jehovah fa tsy mivadika. (Apok. 7:1-4) Inona no valisoa ho azon’ny voahosotra noho ry zareo tsy mivadika? Ho lasa mpanjaka sy mpisorona miaraka amin’i Kristy any an-danitra ry zareo. (Apok. 20:6) Ho faly be i Jehovah sy Jesosy ary ny anjely, rehefa mahita ny voahosotra 144 000 mandray ny valisoany.
Hita eo ny seza fiandrianan’Andriamanitra, ary mamirapiratra be ilay izy. Mijoro eo anoloan’izy io sy eo anoloan’ny Zanak’ondry ny vahoaka be manao akanjo fotsy lava sady mitazona sampana palmie (Fehintsoratra 7)
7. Iza no hitan’i Jaona tao amin’ny fahitana, araka ny Apokalypsy 7:9, 10? Ary inona no ataon-dry zareo? (Jereo ny sary eo amin’ny fonon’ity gazety ity.)
7 Nahita zavatra hafa mahafinaritra be i Jaona, rehefa avy niresaka momba an’ireo mpanjaka sy mpisorona miisa 144 000. Nahita “vahoaka be” tafavoaka velona tamin’ny Hara-magedona izy. Betsaka kokoa noho ilay antokon’olona voalohany ry zareo, ary tsy voafaritra ny isany. (Vakio ny Apokalypsy 7:9, 10.) Manao “akanjo fotsy lava” ry zareo. Midika izany hoe tsy ‘voapentimpentin’ny’ tontolon’i Satana ry zareo, ary tsy mivadika amin’Andriamanitra sy Kristy. (Jak. 1:27) Miantsoantso ry zareo hoe voavonjy noho izay nataon’i Jehovah sy Jesosy, ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra. Mitazona sampana palmie koa ry zareo, ary midika izany fa falifaly ry zareo manaiky hoe i Jesosy no Mpanjaka voatendrin’i Jehovah.​—Ampitahao amin’ny Jaona 12:12, 13.
8. Inona no lazain’ny Apokalypsy 7:11, 12 momba ny fianakavian’i Jehovah any an-danitra?
8 Vakio ny Apokalypsy 7:11, 12. Ahoana no nataon’ny tany an-danitra rehefa nahita ny vahoaka be? Hitan’i Jaona hoe faly be ry zareo sady nidera an’Andriamanitra. Ho faly be koa io fianakavian’i Jehovah any an-danitra io rehefa tanteraka ilay fahitan’i Jaona, ka tafavoaka velona amin’ny fahoriana lehibe ny vahoaka be.
9. Inona no ataon’ny vahoaka be amin’izao, araka ny Apokalypsy 7:13-15?
9 Vakio ny Apokalypsy 7:13-15. Nilaza i Jaona hoe ‘nanasa sy namotsy ny akanjony tamin’ny ran’ny Zanak’ondry’ ny vahoaka be. Midika izany fa manana feon’ny fieritreretana madio ry zareo, ary ankasitrahan’i Jehovah. (Isaia 1:18) Kristianina nanokan-tena sy vita batisa ry zareo, ary tena mino ny soron’i Jesosy sy mifandray tsara amin’i Jehovah. (Jaona 3:36; 1 Pet. 3:21) Noho izany, dia mahazo mijoro eo anatrehan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra ry zareo, mba hanao “fanompoana masina ho azy andro aman’alina” ao amin’ny tokotanin’ny tempoliny ara-panahy. Tena mazoto mitory sy manao mpianatra ry zareo, satria ny Fanjakan’Andriamanitra no zava-dehibe indrindra aminy. Ry zareo mihitsy aza no manao ny ankabeazan’io asa io.​—Mat. 6:33; 24:14; 28:19, 20.
Falifaly ny vahoaka be anisan’ny ondry hafa fa tafavoaka velona tamin’ny fahoriana lehibe (Fehintsoratra 10)
10. Inona no atokisan’ny vahoaka be? Inona ilay fanantenan-dry zareo ho tanteraka?
10 Rehefa tafavoaka velona amin’ny fahoriana lehibe ny vahoaka be, dia afaka matoky fa mbola hikarakara an-dry zareo foana Andriamanitra. Milaza mantsy ny Apokalypsy hoe ‘hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo Ilay mipetraka eo amin’ny seza fiandrianana.’ Ho tanteraka amin’izay ilay zavatra efa nantenain’ny ondry hafa hatry ny ela. Izao ilay izy: ‘Hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana.’​—Apok. 21:3, 4.
11-12. a) Inona no fitahiana miandry ny vahoaka be, araka ny Apokalypsy 7:16, 17? b) Afaka manao inona ny ondry hafa rehefa Fahatsiarovana? Nahoana ry zareo no manao an’izany?
11 Vakio ny Apokalypsy 7:16, 17. Mijaly ny mpanompon’i Jehovah sasany amin’izao, satria tsy manana vola hividianana sakafo, na mipetraka any amin’ny tany misy korontana na ady. Misy koa gadraina satria tsy manaiky hivadika amin’i Jehovah. Tena faly anefa ny vahoaka be hoe rehefa tafavoaka velona amin’ny fandringanana an’ity tontolo ity ry zareo, dia tsy ho ory sakafo mihitsy ary hanana an’izay ilainy foana mba hifandraisana tsara amin’i Jehovah. Tsy hihatra amin-dry zareo koa ny “hafanana mandoro”, izany hoe ny hatezeran’i Jehovah, rehefa handringana an’ity tontolon’i Satana ity izy. Rehefa mifarana ny fahoriana lehibe, dia hitarika ny vahoaka be ho any amin’ny “loharanon’ny ranon’aina” i Jesosy, izany hoe hanampy an-dry zareo mba hiaina mandrakizay. Eritrereto ange e! Tena miavaka ny fanantenan’ny vahoaka be. Mety tsy ho faty mihitsy ry zareo, ary ry zareo irery no ho hoatr’izany amin’ny olona rehetra niaina hatramin’izay!​—Jaona 11:26.
12 Tena misaotra an’i Jehovah sy Jesosy ny ondry hafa, satria manana fanantenana tena tsara. Marina fa tsy voafidy ho any an-danitra ry zareo, nefa tena tian’i Jehovah sy sarobidy aminy hoatran’ny voahosotra ihany. Samy afaka midera an’Andriamanitra sy Kristy na ny voahosotra na ny ondry hafa. Manao an’izany ry zareo, rehefa manatrika ny Sakafo Harivan’ny Tompo.
DERAO I JEHOVAH SY JESOSY REHEFA FAHATSIAROVANA
Mampahatsiahy antsika ilay mofo sy divay ampandalovina amin’ny Fahatsiarovana hoe maty ho antsika i Jesosy mba hahazoantsika fiainana (Fehintsoratra 13-15)
13-14. Fa maninona ny voahosotra sy ny ondry hafa no tokony hanatrika ny Fahatsiarovana?
13 Tao anatin’ny taona vitsivitsy lasa, dia 1 ao anatin’ny 1000 teo ho eo no nihinana ny mofo sy nisotro ny divay rehefa Fahatsiarovana. Tsy misy manao an’izany mihitsy aza any amin’ny ankamaroan’ny fiangonana maneran-tany. Manantena hiaina eto an-tany ny ankamaroan’ny olona manatrika ny Fahatsiarovana. Fa maninona àry ry zareo no mbola manatrika ny Sakafo Harivan’ny Tompo ihany, na dia tsy mandray anjara amin’ilay izy aza? Azo oharina amin’ny olona manatrika mariazin’ny namany izany. Manatrika an’ilay mariazy izy, satria te hampiseho hoe tiany ilay mpanambady ary te hanotrona azy ireo izy. Hoatr’izany koa ny ondry hafa manatrika ny Fahatsiarovana. Tonga eo ry zareo satria te hampiseho hoe tiany i Kristy sy ny voahosotra, ary te hanohana an-dry zareo izy. Manatrika ny Fahatsiarovana koa ny ondry hafa, satria te hampiseho hoe mankasitraka ny soron’i Jesosy. Noho io sorona io mantsy, dia ho afaka hiaina mandrakizay eto an-tany ry zareo.
14 Misy antony lehibe hafa koa mahatonga ny ondry hafa hanatrika ny Fahatsiarovana. Te hankatò ny didin’i Jesosy ry zareo. Tamin’i Jesosy nanao ny Sakafo Harivan’ny Tompo voalohany niaraka tamin’ny apostoliny tsy mivadika, dia izao no nolazainy: “Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.” (1 Kor. 11:23-26) Mankalaza ny Sakafo Harivan’ny Tompo àry ny ondry hafa, raha mbola misy voahosotra velona eto an-tany. Manasa ny olona rehetra mihitsy ry zareo mba hanatrika azy io miaraka aminy.
15. Ahoana no azontsika tsirairay iderana an’Andriamanitra sy Kristy rehefa Fahatsiarovana?
15 Midera an’Andriamanitra sy Kristy isika amin’ny Fahatsiarovana, rehefa mihira sy mivavaka. Izao no lohatenin’ny lahatenin’ny Fahatsiarovana amin’ity taona ity: “Ankasitraho Izay Nataon’Andriamanitra sy Kristy ho Anao!” Hanampy antsika hankasitraka kokoa an’i Jehovah sy Kristy izy io. Rehefa ampandalovina ny mofo sy ny divay, dia hotsaroan’ny mpanatrika hoe mampiseho ny vatan’i Jesosy sy ny rany izany. Hotsaroantsika koa fa namela ny Zanany ho faty ho antsika i Jehovah mba hahazoantsika fiainana. (Mat. 20:28) Tokony hanatrika Fahatsiarovana daholo àry izay tia an’ilay Raintsika any an-danitra sy ny Zanany.
ISAORY I JEHOVAH NOHO NY FANANTENANAO
16. Inona no mampitovy ny voahosotra sy ny ondry hafa?
16 Misy itovizany ihany ny voahosotra sy ny ondry hafa, raha ny marina. Samy sarobidy amin’Andriamanitra, ohatra, ry zareo. Mitovy ihany mantsy ny vidiny naloan’i Jehovah mba hanavotana an-dry zareo. Nanome ny ain’ny Zanany malala izy, mba hamonjena ny voahosotra sy ny ondry hafa. Samy tsy maintsy miezaka koa ry zareo mba tsy hivadika amin’Andriamanitra sy Kristy. (Sal. 31:23) Tsy izay ihany fa afaka miasa tsara amin’ny rehetra ny fanahy masina, na voahosotra izy na tsia. Midika izany fa omen’i Jehovah fanahy masina arakaraka izay ilainy ny olona tsirairay. Ny fanantenan-dry zareo fotsiny àry no samy hafa.
17. Inona no tsy andrin’ny sisa voahosotra?
17 Tsy hoe vao teraka ny Kristianina voahosotra dia efa manantena hiaina any an-danitra. Tsy manantena ho any an-danitra izy, raha tsy efa ataon’Andriamanitra ao am-pony ny faniriana ho any. Lasa mieritreritra an’ilay fanantenany izy, dia mivavaka momba an’izany, ary lasa tsy andriny ny hahazo ny valisoany any an-danitra. Tsy fantany hoe hoatran’ny ahoana ilay vatana ara-panahy ho azony. (Fil. 3:20, 21; 1 Jaona 3:2) Na izany aza, dia tena te hihaona amin’i Jehovah sy Jesosy ary ny anjely izy ireo. Efa tsy andriny koa ny hahita ny voahosotra hafa, sy ny hiara-manjaka amin’izy ireo any an-danitra.
18. Inona no efa tsy andrin’ny ondry hafa?
18 Tena te hiaina mandrakizay eto an-tany ny ondry hafa, ary faniriana voajanahary amin’ny olombelona izany. (Mpito. 3:11) Efa tsy andrin’izy ireo ny hanova ny tany manontolo ho paradisa, dia hanao ny tranony sy hikarakara ny zaridainany. Ho salama tsara daholo izy ireo sy ny fianakaviany amin’izany fotoana izany. (Isaia 65:21-23) Efa tsy andrin’izy ireo koa ny hitety tany, dia hitsangantsangana any an-tendrombohitra sy any anaty ala ary any an-dranomasina. Hianatra momba an’ireo zavaboary be dia be noforonin’i Jehovah ry zareo amin’izany. Fa ny tena mahafaly an-dry zareo, dia hoe vao mainka hinamana be amin’i Jehovah ry zareo, ary hihatsara foana ny fifandraisan’izy ireo aminy.
19. Inona no azon’ny tsirairay atao mandritra ny Fahatsiarovana? Rahoviana izy io no hatao amin’ity taona ity?
19 Nomen’i Jehovah fanantenana faran’izay tsara ny mpanompony nanokan-tena ho azy. (Jer. 29:11) Fotoana miavaka mba hiderana an’Andriamanitra sy Kristy ny Fahatsiarovana, ary afaka manao an’izany isika rehetra. Hidera an-dry zareo isika noho izay nataony mba hahafahantsika hiaina mandrakizay. Ny Fahatsiarovana no fivoriana lehibe indrindra tokony hatrehin’ny Kristianina. Hatao amin’ny Asabotsy 27 Martsa 2021 aorian’ny filentehan’ny masoandro izy io. Betsaka no ho afaka hanatrika tsara an’io fotoan-dehibe io any amin’ny toerana maro. Misy indray enjehina na migadra mihitsy, nefa mbola hanatrika azy io ihany. Na irery isika amin’io na miaraka amin’ny fiangonana na antoko-mpitory, dia tadidio fa mijery antsika i Jehovah, Jesosy, ny anjely, ary ny voahosotra efa natsangana tamin’ny maty. Mirary Fahatsiarovana mahafinaritra ho antsika rehetra àry e!
Rehefa mitontona asabotsy ny Fahatsiarovana, hoatran’ny amin’ity taona ity, dia tsy misy fivorian’ny fiangonana amin’ny faran’ny herinandro. Noho izany, dia tsy misy lahatsoratra fianarana natao hodinihina amin’ny herinandro ambony
Inona ilay fanazavana vaovao momba ny “vahoaka be” noresahina tamin’ny 1935?
Hanao ahoana ny fiainan’ny vahoaka be aorian’ny fahoriana lehibe?
Inona no azontsika rehetra atao mba hiderana an’Andriamanitra sy Kristy amin’ny Fahatsiarovana?
HIRA 150 Mitadiava An’i Jehovah mba ho Voavonjy
^ feh. 5 Andro manokana ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah ny 27 Martsa 2021. Hankalaza ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy isika ny harivan’io. Anisan’ilay nantsoin’i Jesosy hoe “ondry hafa” ny ankamaroan’ny olona hanatrika azy io. Nisy zavatra miavaka nampahafantarina antsika momba ny ondry hafa, tamin’ny 1935. Inona izany? Inona no zavatra tsara miandry ny ondry hafa aorian’ny fahoriana lehibe? Ahoana no azon’ny ondry hafa iderana an’Andriamanitra sy Kristy rehefa Fahatsiarovana?
^ feh. 2 FANAZAVANA: Manara-dia an’i Kristy sy manantena hiaina mandrakizay eto an-tany ny ondry hafa. Mandritra ny andro farany ny sasany amin’izy ireo vao nanomboka nanompo an’i Jehovah. Anisan’ny ondry hafa ny vahoaka be. Mbola velona ry zareo mandritra ny fahoriana lehibe, rehefa hitsara ny olombelona i Kristy. Ho tafavoaka velona amin’ny Hara-magedona ry zareo.
^ feh. 4 FANAZAVANA: Sisa voahosotra no iantsoana ny Kristianina voahosotra mbola eto an-tany. Mihinana ny mofo sy misotro ny divay ry zareo rehefa Sakafo Harivan’ny Tompo.
Hizara Hizara Midera An’Andriamanitra sy Kristy ny Vahoaka Be
w21 Janoary p. 14-19
Miezaha ho Tony Foana ary Matokia An’i Jehovah
Inona no Azo Ianarana avy Amin’ilay “Mpianatra Tian’i Jesosy”?
Miraiki-po Amin’ny Mpiara-manompo ve Ianao?
TANTARAM-PIAINANA Tsy mba Nanda An’i Jehovah Mihitsy Izahay!
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2021
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2021
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2021
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2021